::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather लोकदोहोरीमा उदाउदै सरीता:: Rojgar Manch ::
लोकदोहोरीमा उदाउदै सरीता
बुधवार, २०७५ जेष्ठ २९ गते ००:५४
सानै उमेरदेखि गीतसंगितमा रुचि राख्ने आपपिपल गोरखाकी सरीता कार्की पछिल्लो समय नेपाली लोकदोहोरी गीतको क्षेत्रमा उदाउदी गायीकाको रुपमा देखापरेकि छिन् । स्कुल पढदा होस या गाँउघरमा मेलापात जादा नै किन नहोस आफ्नो साथिसमूहको नेतृत्व गर्दै दोहोरी खेल्न उनी सधै अग्रसर भैरहन्थिन् ।
अध्ययनको शिलशिलामा काठमाडौ छिरेपछि गीतसंगितको बारेमा ज्ञान हासिल गर्न र स्वर निर्खान उनले थप अवसर पाइन । लोकदोहोरी गायक–गायीकाको उत्पादन थलोका रुपमा चिनिने दोहोरी साझमा जोडिएपछि त उनको गायकी कला झनै सुमधुर बन्दै जान थाल्यो ।
वि.सं. २०६४ सालदेखि दोहोरी साझको स्टेजमा आफ्ना प्रस्तुती पस्कन थालेकि कार्कीले लगातार ४ वर्षसम्म आफुलाई दोहोरी साझको गायनमै सीमित राखिन । त्यसपछि भने विंस. २०६८ मा पहिलो दोहोरी गितीसंग्रह ‘कति रूनु छ’ मार्फत नेपाली गितसंगितको क्षेत्रमा औपचारिकरुपमा उनको आगमन भयो ।
पहिलो संग्रहमार्फत नै दोहोरी गितसंगितको क्षेत्रमा चर्चा बटुल्न सफल उनले त्यसै वर्ष ‘जुनकिरी’ एल्बमबाट इमेज अवार्डमा नव–गायिकाको अवार्डसमेत हात पारिन । त्यसयता लगातार दोहोरी गितसंगितमा लागिरहेकि उनका ‘खोलीमा जलुका’, ‘मायालु हजार’, ‘जुनकिरी’, ‘बदमास’ लगायत दुई दर्जन भन्दा बढी चर्चित गितहरु बजारमा आइसकेका छन् ।
युटुव भ्युअर्सका आधारमा हेर्ने हो भने पनि उनीद्धारा स्वरवद्ध लोकदोहोरी गितले लगातार निकै राम्रा दर्शक तथा श्रोताहरु पाइरहेको छ । स्थानीय स्तरमा आयोजना हुने कार्यक्रमदेखि लिएर देशका विभिन्न भागमा आयोजित स्टेज शोहरुमा पनि अत्याधिक माग हुन थालेकी उनी आफु लगातारको मेहनत र साधनाले यहाँसम्म आइपुगेको बताउछिन ।
26. खेलकुदः च्याम्पियनस लिगमा मेस्सीको कीर्तिमानी हृयाट्रिक
Results 26: You are at page2of 2